တတ်နိုင်တဲ့ဘက်အနေပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အပင်ပန်းခံကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူလေးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ – Online News Post
တတ်နိုင်တဲ့ဘက်အနေပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အပင်ပန်းခံကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူလေးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ
ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ် မြောက်ရေး အတွက် ဇာတ်ဆောင် မင်းသား မင်းသမီး တွေ က အဓိက ကျ သလို ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် တွေကလည်း မပါမဖြစ်တဲ့ အနု ပညာရှင် တွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . အရေး ပါတဲ့ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် တွေထဲမှာ မှ လမင်းကဗျာ က တော့ ပရိသတ် တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာ အသေ အချာပါ ။ လမင်းကဗျာ က ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား အတော်များများ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် လေ့ ရှိသူဖြစ် ပြီး Photo shooting တွေကို ရိုက်ကူးလေ့ ရှိတာကို တွေ့ရပါ တယ် … .
ဒါ့ အပြင် လမင်းကဗျာ က ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေကိုလည်း ဦးစီး လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ လက်ရှိ မှာ တော့ လမင်းကဗျာ က ဖြစ်ပေါ် နေ တဲ့ အခြေ အနေ အရပ်ရပ် ကြောင့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေနဲ့ စီးပွား ရေး လုပ်ငန်း တွေကို ခေတ္တရပ်နား ထားပြီး ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်း နေတာကို တွေ့ရပါ တယ် ။ သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ က တဆင့် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေ ကိုလည်း ပရိသတ် တွေထံ ဝေမျှလေ့ ရှိတာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
ယနေ့ မှာလည်း လမင်းကဗျာ က နေပူထဲမှာ အပင်ပန်းခံ ကာ နိုင်ငံ အတွက် ကြိုးစား ရပ်တည် နေတဲ့ ပြည်သူ တွေကို အလှူဒါန ပြု လုပ်နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အလှူပြုနေ တဲ့ ပုံလေးတွေ အပြင် “ ဒီနေ့ လှည်းတန်းမှာ တက်နိုင်သ လောက်လေးလှူဖြစ်တယ် လှူတဲ့ သူတွေ များလိုက် တာ စတုဒီသာ ကျွေးနေသလိုပဲ ကျမ်းမာ ချမ်းသာကြ ပါ စေ လိုရာ ဆန္ဒတွေလဲ အမြန်ဆုံး ပြည့်ပါစေ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကိုလည်း ရေးသား ထားတာဖြစ် လို့ ချစ် ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှု့ စေဖို့ အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက် ပေးလိုက် ပါတယ် နော် … .
photo credit : Lamin Kabyar ’ S FB account
ဇာတ္ကား တစ္ကားျဖစ္ ေျမာက္ေရး အတြက္ ဇာတ္ေဆာင္ မင္းသား မင္းသမီး ေတြ က အဓိက က် သလို ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတြကလည္း မပါမျဖစ္တဲ့ အႏု ပညာရွင္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . အေရး ပါတဲ့ ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတြထဲမွာ မွ လမင္းကဗ်ာ က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္မွာ အေသ အခ်ာပါ ။ လမင္းကဗ်ာ က ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလ့ ရွိသူျဖစ္ ၿပီး Photo shooting ေတြကို ရိုက္ကူးေလ့ ရွိတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္ … .
ဒါ့ အျပင္ လမင္းကဗ်ာ က ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတြကိုလည္း ဦးစီး လုပ္ကိုင္ ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ လက္ရွိ မွာ ေတာ့ လမင္းကဗ်ာ က ျဖစ္ေပၚ ေန တဲ့ အေၿခ အေန အရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြနဲ႔ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ေတြကို ေခတၱရပ္နား ထားၿပီး ျပည္သူ ေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ က တဆင့္ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကိုလည္း ပရိသတ္ ေတြထံ ေဝမၽွေလ့ ရွိတာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ယေန႔ မွာလည္း လမင္းကဗ်ာ က ေနပူထဲမွာ အပင္ပန္းခံ ကာ နိုင္ငံ အတြက္ ႀကိဳးစား ရပ္တည္ ေနတဲ့ ျပည္သူ ေတြကို အလႉဒါန ျပဳ လုပ္ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အလႉျပဳေန တဲ့ ပုံေလးေတြ အျပင္ “ ဒီေန႔ လွည္းတန္းမွာ တက္နိုင္သ ေလာက္ေလးလႉျဖစ္တယ္ လႉတဲ့ သူေတြ မ်ားလိုက္ တာ စတုဒီသာ ေကၽြးေနသလိုပဲ က်မ္းမာ ခ်မ္းသာၾက ပါ ေစ လိုရာ ဆႏၵေတြလဲ အျမန္ဆုံး ျပည့္ပါေစ ” ဆိုတဲ့ စာသားေလး ကိုလည္း ေရးသား ထားတာျဖစ္ လို႔ ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈ႔ ေစဖို႔ အတြက္ ျပန္လည္ တင္ဆက္ ေပးလိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post အမိုက်စား အမူအယာလေးနဲ့ ပုရိသတို့အကြိုက် ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး
Next post MRTVနဲ့ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ စာ